जान्नुहोस् हनुमानसँग जोडिएका यी रोचक प्रसंग ? - IAUA
जान्नुहोस् हनुमानसँग जोडिएका यी रोचक प्रसंग ?
ramkrishna October 24, 2017	जान्नुहोस् हनुमानसँग जोडिएका यी रोचक प्रसंग ?
काठमाडौं। हिन्दू ग्रन्थअनुसार, भगवान हनुमानलाई रुद्रको ११औँ अवतार मानिएको छ । यही कारण अनौठो शिव लीलाहरु जस्तै हनुमानसँग जोडिएका पौराणिक प्रसंग उनको शक्तिलाई उजागर गर्छ । शास्त्रहरुमा सनुजस्तै चम्किला, चट्टानजस्तै शरीर भएका, सबै गुणले भरिएका स्वा, ज्ञानी, रामका परम भक्त श्री हनुमानको बारेमा जान्नुहोस् केही रोचक प्रसंग ।
एक पटक भगवान शिवले माता पर्वतीको इच्छाअनुसार सुनको महल बनाए । तर, ब्राम्हणको भेषमा आएर भक्त रावणले महल मागेपछि पार्वतीसहित दान गरिदिए । यो देखेर पार्वती माता रिसाइन् । शिवले उनलाई मनाउँन एउटा वचन दिए, ‘त्रेतायुगमा म बाँदरको अवतार लिनेछु, त्यस सयम तिमी मेरो पुच्छर बन्नु । जब म सिता माताको खोजीका क्रममा यही सुनको महल अर्थात् लंका पुग्छु, तिमी पुच्छर बनेर लंकालाई आगो लगाएर दण्डित गर्नु । यो प्रसंग श्री हनुमानले लंकादहनको एक कारण मानिएको छ ।
एक पटक हनुमान श्री रामको दरबारमा खानका लागि बसे । माता जानकीले खाना थपिदिइरहिन्, तर हनुमानको पेट भरिएन । फेरि सीताले पनि केही समयसम्म थपिरहिन्, फेरि पनि हनुमानको पेट नभरिएपछि उनले तुलसीको एक पातमा राम नाम लेखिन् र भोजनमा राखिदिइन् । तुलसी पत्र खाएपछि बल्ल हनुमान अघाए र भगवान शिव शंकर प्रसन्न भएर आशिर्वाद दिए, ‘तपाईको राम भक्ति युगसम्म सम्झिइनेछ र तपाई संकट मोचन भनेर चिनिइने छ ।
हनुमानको सबैभन्दा दुर्लभ रुपमा पंचमुखी रुप हो । राक्षहरुको वध गर्नका लागि हनुमानले यो रुप लिएको मानिन्छ ।
हनुमानको रौँ–रौँमा रामको ध्वनी आउँछ भनिन्थ्यो । एक पटक माता सीता तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई विश्वास दिलाउँन हनुमानले आफ्नो छाती चिरी हृदयमा बसेको राम र सीताको तस्विरलाई सभामा उपस्थित व्यक्तिहरुलाई देखाएका थिए । भक्तिको यो पराकाष्ठा देखेर भगवान रामले हनुमानलाई अँगालो हालेका थिए ।
राज्याभिषेक पछि उपहार दिने क्रममा रामले हनुमानलाई आफ्नो गलामा भएको मोतीको माला दिएका थिए, जुन एकदमै मुल्यवान थियो । तर, उनले ति सबै मोतीका दानालाई टोकेर फुटाई दिए । किन यस्तो गर्यौ भन्ने सिताको प्रश्नमा उनले जुन वस्तुमा राम नामको ध्वनि सुनिइदैन त्यो उनको लागि व्यर्थ हुने बताए ।
हनुमानलाई सिन्दुर निकै प्रिय लाग्ने बताइन्छ । एक पटक सीताको कक्षमा हनुमान पुगे, जहाँ सिता आफ्नो सिउँदोमा रातो रंगको वस्तुले रंगाउँदै थिइन् । हनुमानले सोधेपछि सीताले प्रभु रामको आयु बढ्छ र प्रभुको स्नेह प्राप्त हुन्छ भनी उत्तर दिइन् । यो सुनेर रामको लामो आयु र स्नेह पाउनका लागि हनुमानले शरीरभरि सिंदुरले पोतका थिए । त्यसैले हनुमानलाई हिन्दुर लगाउँन मन पर्छ भनिन्छ ।
हनुमान भगवान शंकरका अवतार, वायुका पुत्र, अंजनीका पुत्र, केसरीका पुत्र, सीता र रामको मानेका आज्ञाकारी पुत्र हुन् । सुर्य देव हनुमानका गुरु हुन् । जुन काम श्री रामले गर्न सकेनन्, त्यो काम रामको नाम लिँदै हनुमानले गरे ।
हनुमानले पुल बिनै समुद्र पार गरे । रावणका अमर राक्षसलाई यति टाढा फ्याके कि पृथ्वीको गुरुत्वआकर्षणभन्दा बाहिर पुगे र ति राक्षस कहिल्यै फर्केर आउन सकेनन् ।weeklynepal
Previous Previous post: रुसी वैज्ञानिकले क्यान्सरको उपचार गर्न सक्ने फल पत्ता लगाए, जुन फल नेपालमा मात्रै पाइन्छ !
Next Next post: शरीरलाई न्यानो राख्ने मसला